Semalt Expert: Nzira Dzakabudirira Kwazvo Kuvhara Referrer Spam Kubva kuGoogle Analytics
The spam muGoogle Analytics (GA) iri kutendeuka. Munguva pfupi yapfuura, vashandi vazhinji vari kundibvunza kuti ndingaita sei ne referrer spam. Mukati memakore mashomanana apfuura, zvinhu zvisingaoneki zvakaonekwa muGoogle Analytics mharidzo uye kwete zvose zvinogona kushandiswa panguva ino - zinc picolinate 40 mg.
Jack Miller, uyo Semalt Mutungamiri Mukuru weVatengi veMutambarakede, anoyeuchidza kuti kushandiswa kwemigwagwa bounty uye kuwanika kwevavha muGoogle Investigation inogona kusimbisa iyi spam. Kuwanikwa kwehutano hwakakosha pane nzira yakakosha yekuita kuti vanhu varege kutumira spam vanotsanangurwa muurongwa ruri pasi apa:
Gadzira Your Hostname
Paunenge uchinge wapera mazita ako ose mazita, unofanirwa kuita chirevo chezvakanaka (REGEX) chinosanganisira chimwe nechimwe chazvo. Zvakakosha kuti iwe unosanganisira zvose zvaunoshandisa hostnames, kana njodzi yekurasikirwa nemashoko akakodzera.
Ita Zita Rakatendwa Nzvimbo Yakakosha
Kana matanho ari pamusoro apa apera, unogona kuva nechokwadi chokuti kesheni ichange isina mahwanda eFantom Spam.
Shanyira Mutungamiri tab, uye uwane mukana waunoda kushandisa.
Sarudza Chiteshi pasi pechitarisiko chechikamu, uye chengetai ipapo Itaiwo Chiteshi
Pinda "Zvakakodzera Hostnames"
MuChinema Mhando, sarudza Custom
Sarudza kupfuura Incorporate Hostnames
Kugadzira Chiteshi Chekugadzira Zvokudya uye Dialect Spam muGoogle Analytics
Kuputira spam kunonyanya kuoma kuziva sezvo iko kushandiswa zita rakakura remusangano, saka zvinoda imwe nzira inoshandiswa nezwi rinosanganisira dzose dzinozivikanwa spam spam. Kuti ugare kwenguva yakati, uchashandisa REGEX yakarongeka yakawanikwa pasi payo mumigwagwa.
Shanyira Mutungamiri tab
Kubva kune chikamu chekupedzisira "VIEW" tsvaga Chiteshi uye chengeta Uchisanganisira Channel
Sanganisira "Crawler Spam Channel" sezita
Futa Shamba, Tsika uye Bhari
Simudza Munda uye Hondo Chinhu
Vakawanda vanokambaira havasi spam kana kubatsira pamishumo yenyu, somuenzaniso, iyo yekuraira. Aya mabhoti achabvumirana nereji kana asina kubviswa mumushumo. Iko spam iyo yava kuiswa muG GA yako haigoni kuregererwa nguva dzose. Ichi ndicho chikonzero nei zvichikosha kuita kuti mitambo isarega kugadzirisa basa remarara. Uyewo, unogona kuchenesa ruzivo rwako rwekare rwakaitwa ne spam kuburikidza nekushandisa zita rakanaka rezita rekushandisa.